Orinasa sy mpamokatra Aos Rosmarinic Aic | Geneham
Anarana: Asidra Rosmarinika
Tsia .: hoe ra
Endrika ivelany: Vovoka volontsôkôlà
Ny asidra rosmarinika dia raisina ho toy ny voajanahary, mahomby ary marin-toerana (maharitra maharitra ny hafanana), fiarovana, tsy misy poizina ary tsy misy vokany hafa, antioxidant tsy voavaha rano ary fampidirana sakafo maitso. Asehon'ny fikarohana fa, ny asidra rosemary dia misy fiantraikany mahery vaika amin'ny fanalefahana ny Radical Free. Ny asany antioxidant dia matanjaka kokoa noho ny vitamina E. Izy io koa dia manana antimicrobial, antivirus, anti-inflammation, antitumor, anti-platelet aggregation ary thrombosis, antiangiogenic, antidepressants, miady amin'ny asan'ny aretina neurodegenerative.
Famaritana: 2.5%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 90%, 98% HPLC
Famaritana: vovoka mavo volontany
Solvent ampiasaina: rano & etanol
Ampahany ampiasaina: ravina
Cas No. .: 537-15-5
a. Antioxidant mety levona amin'ny rano voajanahary, izay be mpampiasa, zava-pisotro misy alikaola, indostria biomedisialy ary indostria fanatsarana tarehy.
d. Vokatry ny fihenan-danja. Izy io dia afaka manentana sy manafaingana ny fatran'ny tavy amin'ny alàlan'ny hetsika fanoherana ny oxidant. Tsy mitazona tosidra ara-dalàna ihany, fa mampiroborobo ny fitambaran'ny lipida hivoaka amin'ny zezika ka mampihena ny lanjany.
Vovoka mavo na mavo-mavo
Vovoka mavo mavo
Teo aloha: Rosemary Oleoresin nalaina
Manaraka: Asidra ursolika